Istaraatiijiyooyin Go-To & Caqabadaha ku Wajahan Suuqgeynta Fasaxa Kadib-Covid Era | Martech Zone
Waqtiga gaarka ah ee sannadka ayaa ku habboon geeska, waqtiga aan dhammaanteen rajeyneyno in aan iska furfuro kuwa aan jecel nahay oo ugu muhiimsanna aan ku raaxeysanno tuulmooyin badan oo dalxiis ah. In kasta oo ay uga duwan tahay ciidaha caadiga ah, sannadkan wuu u kala duwan yahay sababo la xiriira carqaladaynta baahsan ee COVID-19.
In kasta oo adduunku wali la halgamayo wax ka qabashada hubin la'aantaas iyo dib ugu soo noqoshada sidii caadiga ahayd, caadooyin badan oo fasax ah ayaa sidoo kale ogaan doona isbeddel waxayna u muuqan karaan kuwo ka duwan sannadkan maaddaama dhinaca dijitaalka ah ee dabaaldegyada ciidahan ay la socdaan dabeecad cusub.
Ciidaha waaweyn ee Caalamka oo dhan
Source: Tilmaamaha Suuqgeynta Fasaxa MoEngage
Caqabadaha Suuqgeynta Fasaxyada ee 2020
2018, iibinta xilliyada fasaxa tafaariiqda iyo ganacsiga elektaroonigga ah ayaa ka sarreeyay tiriliyan-dollar calaamadee markii ugu horeysay abid. In kastoo sanadkaan iibku uu gaabis noqon karo laakiin lahaanshaha istiraatiijiyad sax ah iyo kanaalo ayaa laga yaabaa inay ka caawiso sumcadaha inay ku riixaan alaabada marinada dhijitaalka ah
Intii ay joogeen Mareykanka iyo Yurub - Jimcaha Madow, Cyber ​​Monday, iyo Kirismaska ​​& Sannadka Cusub ayaa si ballaaran caan u ah; Koonfurta Bari Aasiya & Hindiya - Diwali, 11:11 [iibinta Maalinta Kaliya] (Nofeembar), Harbolnas (Diseembar), iyo Black Friday ayaa ku badan macaamiisha.
Iyada oo isbeddel lagu sameynayo qaabka isticmaalka, dookha isticmaalaha iyo guud ahaan awoodda wax iibsiga ee macaamiisha, magacyadu waxay u baahan yihiin inay beddelaan istiraatiijiyadooda suuqgeynta fasaxa si ay u daboolaan baahiyaha cusub. Waa kuwan qaar ka mid ah caqabadaha jira oo ay ugu wacan tahay aafada baahsan ee hor istaagi karta sahlanaanta Suuqgeynta Fasaxa:
Iibsadayaashu waa kuwo aad u qiimo badan: Macaamiisha gaar ahaan millennials-ka waxay badaleen dhaqankoodii kharashka iyagoo ka gudbay xiirayaasha una gudbay keydiyaasha. Macaamiisha ayaa noqon doona kuwa aad u qiimo badan una dhaqso badan inta ay wax iibsanayaan.
Arrimaha gaarsiinta silsiladdaXiritaanka iyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa ee adduunka oo dhan, saadka warshadaha tafaariiqda ayaa si adag loo garaacay. Bishii Abriil, iibka tafaariiqda ee Maraykanka ayaa hoos u dhacay 16.4% 3 sababo la xiriira sahayda alaabada. Dhibaatooyinka ay ka mid yihiin shaqo yaraanta, xayiraadaha gaadiidka, iyo xirnaanshaha xuduudaha ayaa ku sii daray dhibaatada haysashada umul raaga muddo dheer.
Rabitaan la'aanta dukaanka: Dadku waa inay taxaddaraan oo ay si gaar ah u doortaan dukaanka. Dukaamaysiga dijitaalka ah iyo khadka tooska ah ayaa xawaaraha kor u qaaday Xitaa magacyadu way aqoonsanayaan isbeddelladan waxayna siinayaan qiimo-dhimis culus oo loogu talagalay dukaamaysiga khadka tooska ah ee maskaxda ku haya macaamiisha.
Istaraatijiyadaha Fasaxa Dib u Laabashada
Ciidaha badanaa waxay ku wareegaan shucuurta iyo isku xirnaanta aadanaha. Calaamaduhu waxay u baahan yihiin inay ku daraan ujeedada dheeriga ah istiraatiijiyadooda isgaarsiinta si macaamiisha ay ugu xirnaadaan alaabtooda. Sida laga soo xigtay a daraasad ay sameysay machadka dhaqaatiirta ee fadhigiisu yahay Boqortooyada Ingiriiska ee xayeysiinta, Ololeyaal leh dareen shucuur ah oo laba jeer la qabtay iyo sidoo kale kuwa leh kaliya maaddooyinka caqliga leh (31% vs. 16%). Suuqgeeye ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in ololayaashaadu ay diiradda saarayaan farxad, wadajir, iyo dabaaldegyo. Waa kuwan xeelado dhowr ah oo loogu talagalay noocyada inay qaataan:
Kordhinta ku-xirnaanshaha soo-qaadista dhinaca: Gaarsiinta xiriir la aanta ayaa ah furaha; macaamiisha ayaa sugaya magacyada qaada talaabooyinka ugu haboon ee amaanka taas oo aakhirka sidoo kale dhista kalsoonida. Soo-qaadashada dhinaca qashinka ayaa noqon doonta mid aad u weyn xilligan fasaxa si looga fogaado qulqulka dukaanka iyo safafka sugitaanka.
Diirada saar suuqgeynta moobiilka - Sida laga soo xigtay Adobe Dib-u-Celinta Fasaxa 2019, 84% kororka ganacsiga elektaroonigga ah ee lagu xisaabtamo xilliyada ciidaha Mareykanka waxaa lagu fuliyay taleefannada casriga ah. Bartilmaameedka diirada la saaray iyo dalabyada ku saleysan goobta ayaa kordhin kara ka qeyb qaadashada noocyada iyo ugu dambeyn iibka.
Isgaarsiinta Dareenka: Tani waa wax aan caqli gal ahayn waana in si qeexan loo sameeyaa. Calaamaduhu waxay u baahan yihiin inay diirada saaraan shucuurta oo ay ka fogaadaan suuq-geynta wejiga oo ay khiyaano ku yeeshaan farriinta. Waxay ubaahan yihiin inay kahadlaan midnimada macaamiisha waqtiyadan adag.
Focus on Digitation: Qaadashada kanaalada dhijitaalka ah ayaa ah xulashada cad ee dukaamada. Iibinta tafaariiqda ee khadka tooska ah ayaa ka sarreeysay bishii Juun marka la barbar dhigo celceliska cudurrada faafa bishii Febraayo.
Ku gaadho isticmaaleyaal badan ogeysiisyada riixista ee gaarka ah: Celceliska isticmaalaha wuxuu helaa in ka badan 65 ogeysiis maalintii! Calaamadaha waa inay la dagaallamaan oo ay kor u qaadaan ciyaarta ogeysiiska riixista. Ha u oggolaan in ogeysiisyadaadu ku lumaan qashinka ogeysiiska, la soo bax ogeysiisyo hodan ah & gaar ahaaneed oo ay adag tahay in la seego.
Kordhinta istiraatiijiyadda suuq geynta moobiilka si horudhac ah iyo qaadashada habka loo yaqaan 'omnichannel' ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato kordhinta hawlgelinta si aad u ballaaran iyadoo la siinayo qiimo dhimis iyo qiimo macaamiisha. Is-habeynta iyo shaqsiyeynta ayaa si weyn u guuleysan doonta xilligan fasaxa ah. U oggolow farxadda ciida!
Soodejiso Hagaha Suuqgeynta Fasaxa MoEngage
Tags: 11: 11masiixigaCOVID-19soo qaadid dhinac gees ahdigitizationjoqoraafiga adduunkahabolnashagaha suuqgeynta fasaxaxilliyada ciidahamarketing mobileistaraatijiyad suuq geynta mobiladadheereynka dibriix ogaysiisyadatafaariiqdakoonfur bari Aasiya fasaxyada
KosmoTime: Abuur Hawlo Waqti U Haysanaya Jadwalkaaga